Fahatsiarovana an’i Jean Freddy : Nitsingerina omaly 16 mai ny nahafatesany… - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversFahatsiarovana an’i Jean Freddy : Nitsingerina omaly 16 mai ny nahafatesany…
Tsy navela andalo fotsiny ny andron’ny 16 mai ho an’ireo mpankafy an’i Jean Freddy, izay andro nahafatesany teto Toamasina renivohitra. Isan’ny nanamarika ny mozika Malagasy i Jean Freddy tamin’ny famokarana kapila teo anivon’ny Discomad, ary izay hira noforoniny dia nalaza avokoa ary tsy mety lefy laza hatramin’izao. Teraka ny 03 marsa 1952 ity mpanan-kanto ity tao amin’ny kaominina Ampasina Maningory distrikan’i Fenerivo Atsinanana. Teo amin’ny faha-49 taonany izy no maty satria ny 16 mai 2001 ny andro nahafatesany izany ho feno 21 taona amin’ity taona ity izany.
Faniriany ary efa azo atomboka ny datin’ny 16 mai teo ny fahatsiarovana miavaka ity mpanan-kanto Malagasy nanana ny naha-izy azy ity. Raha jerena mantsy efa maro ihany ireo mpanan-kanto nodaisin’ny fahafatesana teto Toamasina nefa nitondra avo ny lazan’i Madagasikara tamin’ny sehatry ny kanto. Isan’ireny i Dede Fenerivo – Razanadahy Théodore na Dor’s groupe – Pika Farthem – Flore – Tombo Danile – Do Soliste – Tsiariana mpitendry angorodao…Ho an’i Jean Freddy dia tena fanta-daza tamin’ny kalitao ny mozika sy ny haavo ara-teknika izay nananany no tena nampiavaka azy. Ny tarika “Miarema” izay nisy an’i Jean Freddy sy Dede Fenerivo no artista faharoa avy aty amin’ny faritra namaky lay tao amin’ny tranompokonolona Isotry Antananarivo, izay ny tarika Voanio no voalohany tamin’izany. Isany nampiavaka an’i Jean Freddy ny fananany feno miavaka sy fomba fihirana hafakely; ka rah any fantatra dia i Jean Freddy sy Tianjama no artista namaky lay tamin’ny fanaovana hira tamin’ny fitenim-paritra teo anivon’ny Discomad; satria talohan’izay dia ireo hira amin’ny fiteny ofisialy ihany no nekena nivoaka teo anivon’ity tranom-pamokarana kapila ity. Fantatra ihany koa fa i Jean Freddy sy Tianjama no isany mpanan-kato avy aty amin’ny faritra nahalafy kapila “45 Tour”, Sigara mentola an’i Jean Freddy sy Soanada ho an’i Tianjama, be indrindra ny taona 1975, izay nahalafona kapila valo alina isany avokoa.
Nisy ny hetsika nokarakarain’ireo mpikarakara isan-taona izany, ka isan’izany ny fanehon-kevitra tamin’ny alalan’ny haino aman-jery nataon’izy ireo. iaraha-mahalalana ihany koa efa notokanana tao Fenerivi atsinanana ny tsangam-bato fahatsiarovana an’i Jean Freddy sy i Dede Fenerivo, izay hita eo amin’ny araben’ny fahaleovan-tena.